शरीरमा भएका लगभग आधा रोगको निवारण बिरे नुन, कसरी गर्ने प्रयोग ? – Kavrepati
Home / समाचार / शरीरमा भएका लगभग आधा रोगको निवारण बिरे नुन, कसरी गर्ने प्रयोग ?
शरीरमा भएका लगभग आधा रोगको निवारण बिरे नुन, कसरी गर्ने प्रयोग ?
admin July 2, 2021	समाचार Leaveacomment 139 Views
बिरेनुन प्राकृतिक नुन हो ।यो हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा डाँडापहराबाट निकालिन्छ ।बिरेनुनको नियमित सेवनले बाथ, पित्त र कफलाईसमेत नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्छ । बिरेनुनको प्रयोग विषेशगरि पेटसम्बन्धी रोगमा बढी मात्रामा प्रयोग हुने गरेको भएपनि यसले उच्च रक्तचापका विरामीलाई पनि बिरे नुनले निकै फाइदा पुग्छ । यो नुनमा सोडियमको मात्रा कम हुने भएकाले उच्च रक्तचापका बिरामीलाई फाइदा पुग्छ।
बिरेनुनको प्रयोगले ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अम्लीयलगायतका समस्याबाट बच्न सकिन्छ । पेट दुखेको, झाडापखला लागेको, पेट ढुस्सिएको आदी बेलामा यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । खाना पचाउनमा बिरेनुनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विशेष गरि ग्यास्ट्रिक भएकाहरुले नियमित रुपमा बिरे नुनको प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।बिरेनुनमा सल्फर, आइरनलगायतका शरीरलाई आवश्यक खनिज तत्व प्रशस्त मात्रामा हुन्छ ।
दिसा पातलो हुने समस्या भएमा प्याजलाई मसिनो गरी काटेर बिरेनुन र कागतीको रस एक चम्चा मिसाई प्रयोग गर्दा तत्कालै राहतको महसुस हुन्छ । पेटमा ग्यास भरिएको बेलामा मनतातो पानीमा बिरे नुन राखेर दिनमा तीनपटक खाँदा यसले फाइदा पुग्छ । कालो नुनको प्रयोगले भोक बढाउँछ ।खाना सजिलै पच्छ । यसैले शरीरले उर्जालाई राम्रोसंग प्रयोगगर्न पाउँछ । यदि कम भोक लाग्ने समस्या छ भने कालो नुनमा सलाद, दही, मोही, कागतीपानी संगै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट शरीर पनि स्वस्थ राख्न सकिन्छ र सोडियमको मात्रा पनि बढ्दैन।
Previous खुल्यो यस्तो हर,कत गर्नुको रहस्य (भिडियो हेर्नुहोस)
Next मंगल ग्रहमा पानीका ठूला–ठूला दर्जनौं ताल !